Koreji Essay muZimbabwe
Yako yega Koreji Chinyorwa pasina kubhadhara kwakavanzika. Raira muZimbabwe tsika dzakatemwa kubva kuUK uye US vatauri vemo. 24/7 Tsigiro, Mahara Dzokororo uye yemhando yepamusoro inoshanda munguva pfupi
Maitiro Ekudzivirira Kubiridzira Paunenge Uchinyora Koreji Chinyorwa?
Wese mudzidzi wepakoreji anodikanwa nechikoro kuti anyore rondedzero yekoreji yekosi yake. Iyo rondedzero ndeimwe yezvakakosha zvikamu zvekoreji kubvumidzwa maitiro, uye inowanzo gwaro rakareba rakazadzwa nharo dzakaomarara, mienzaniso, uye nyaya dzevanhu. Wese mudzidzi ane mvumo yekuendesa yake yega chinyorwa kuti chiongororwe. Nekudaro, havazi vese vanonyora yakafanana mhando yenyaya. Vamwe vari nani pakunyora zvekugadzira, zvidimbu zvepakutanga, nepo vamwe vachinetseka nemisangano yekunyora kudzidza. Zvinogona kuve zvakaoma kwazvo kukoreji yekubvuma bhodhi kuti iongorore zvinyorwa zviviri zvakasiyana zvakanyanya.
Vanyori vorondedzero yekoreji vanoedzwa kazhinji kuitira kuti vave nechokwadi chekuti vanogara nguva dzose pamusoro pemutambo wavo pese panosvika zvekugadzira zvemhando yepamusoro zvakanyorwa nekukurumidza. Mapepa mazhinji anomhanyisa kuburikidza nevanobiridzira kubira uye vabatsiri vegirama kuti vaone kuti munyori haana kuita husimbe chero panguva yekunyora. Vadzidzi veFreshman vanowanzo tora bvunzo kuti vaone kana vaine ruzivo rwakakwana pamusoro penyaya yavanenge vachinyora pamusoro. Kunyangwe upperclassmen anofanirwa kutora bvunzo imwechete kuitira kuti aratidze kuti vane hunyanzvi hwekuverenga nekunyora hunodiwa pakubvumirwa kukoreji.
Kune akawanda masevhisi akasiyana anopihwa nevanyori vorondedzero vanyori. Iyo yakanakisa uye yakachipa nzira yekugamuchira mhinduro pane yako yekushandisa rondedzero ndeye kushandisa yepamhepo sevhisi. Aya masevhisi anozopa makomendi kubva kune vatengi pachavo. Kuti uwane mhinduro yakanangana kubva kunobva, sevhisi inofanirwa kupa mhinduro yemibvunzo iyo inobvunza mibvunzo yakakosha maererano nekunyora kwako mapepa uye mhinduro dzakagamuchirwa. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti uenzanise yako yekunyora bepa sevhisi kune mamwe masevhisi kuti uone kana iwe uri kuwana rakanakisa sevhisi kana kwete.
Iwe unogona zvakare kuhaya sevhisi yekoreji rondedzero nyanzvi uyo anoongorora uye nekuvandudza ako ekunyora mabasa. Kune akati wandei akajairika ezvinyorwa zvinyorwa izvo vadzidzi vanodikanwa kuti vanyore kukoreji kunyorera. Mubvunzo wakajairika uyo mapepa anoda kupindurwa ndewokuti 'Ndiwe ani? '. Pamusoro peizvi, mapepa mazhinji anodawo rondedzero yakadzama yekugadzwa kwekoreji, hunhu hwemudzidzi uye kwaakabva uye kunyangwe ruzivo nezve kugona kwake mumitambo. Nyanzvi dzinogona kugadzirisa matambudziko ese aya nesimba.
Kunyorera sevhisi kunopawo vadzidzi matipi ekugadzirisa matambudziko nekunyora mapepa avo nemazvo. Dzimwe nguva, vanyori vhezheni vanyori vanoona basa rekugadzira iro gwaro redzidzo rinotyisa kwazvo. Izvi zvinonyanya kuitika kune vadzidzi vasina ruzivo mukunyora zvinyorwa zvekoreji. Vanyori vakadaro vanofanirwa kutsvaga kuraira kubva kune vane ruzivo vanyori vanogona kuvatungamira pamibvunzo ipi kuti vabvunze uye neruzivo rwekuti vaunganidze vasati vanyora basa. Vanyori vakadaro vanogona kubatsira vadzidzi nekupa matipi ekuti vangatanga sei basa uye nekupa matipi ekunyora ndima yekuvhara.
Vadzidzi vazhinji vanofunga kuti zvakaoma kutenga zvinyorwa online nekuti havazive zvekutarisa. Ichi ndicho chikonzero vamwe vadzidzi vanotenga zvinyorwa pane zvinyorwa zvekoreji. Zvisinei, izvi hazvisizvo; pane zvinhu zvakasiyana siyana zvinoona mhando yezvinyorwa zvakadaro. Vanyori vanotenga zvinyorwa paInternet havafanirwe kutenga chinyorwa chimwe mushure mechimwe. Izvi zvinoreva kuti vanogona kusevha nguva nekutenga chete zvinyorwa zvavanoda. Izvi zvinobatsira zvikuru sezvo rondedzero yekunyora ichikurumidza kana ruzivo ruchiunganidzwa munzvimbo imwechete.
Imwe bhenefiti yekushandisa sevhisheni kugadzira uye kugadzirisa miganho ndeyekuti ivo vanogona kugadzirisa iwo marongero ayo mairi maayesi anogadzirwa. Ivo vanogona kugadzira odhi iyo inogutsa kwazvo izvo zvinodiwa nemutengi. Izvi zvinoreva kuti mupi webasa anogona kugadzirisa odha uye kunyora rondedzero zvinoenderana nezvinodiwa nemudzidzi.
Sezvo vanhu vazhinji vanonyora kunyorera kukoreji vane ruzivo rwakaganhurirwa mukunyora rondedzero, vanowanzo tya nekushandisa sevhisi yakadaro. Nekudaro, kana munyori anoshandisa sevhisi aine ruzivo mukugadzira nekugadzirisa mapepa akanyorwa, saka ndiye munhu akanakisa kupa rubatsiro. Hazvireve kuti munyori haakwanise kushandisa sevhisi yakadai. Nekudaro, kana akaishandisa zvisizvo, zvinogona kukonzera dambudziko kune anenge achinyorera. Naizvozvo, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti sevhisi inoshandiswa mushe kuitira kudzivirira kuba.